Fiahiahiana sa fahafantarana mihitsy fa tsy ho lany ve? Tsy ny lafiny propagandy ihany anefa fa ny lafiny fanohanana ihany koa dia hita ho nitsimbadika aty amin’ny kandida laharana faha-25, Marc Ravalomanana, ny ankamaroan’ny tohivakany. Na hatramin’ireo nilaza azy ho tsy tonga nifidy na ireo antsoina hoe “majorité silencieuse” toy ny fikambanana MCI aza dia efa nanao fanambarana ihany koa ary vao nanamafy izany ny alakamisy teo fa aleon-dry zareo i Dada. Hita ho mirona kokoa any amin’ity kandida ity ihany koa hatramin’ny fianakaviambe iraisampirenena ary efa voatatitry ny onjam-peo iraisam-pirenena RFI vao haingana moa izany fiaiken’ny avy any Dilambato izany fa tena mitombina na hoe “réaliste” kokoa ny fandaharan’asan’ny K 25. Ny ekipan’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, izay kandida nahazo isan-jato 8 mahery koa aza hita ho mirona amin’izany fanohanana an’i Dada izay. Ireo mpitondra fiarakaretsaka, vondron’olon-tsotra, ny ankamaroan’ireo tao amin’ny firaisankinan’ny kandida sy ny hafa maro tsy voatanisa dia toa efa mandindona sahady fa akaiky ny fandresen’i Dada.